श्रद्धा कोइराला काठमाडौं, १४ जेठ
साँझको समय । फेसबुकको म्यासेन्जरमा घण्टी बज्यो । ‘ओहो ! कसको म्यासेज आयो ?’ हतारिँदै आँखा म्यासेन्जरमा पुर्‍याएँ ।
म्यासेज थियो पत्रकार गुञ्जन पाण्डेको ।
उनी विगत ३ वर्षदेखि अमेरिकाको ओहायो राज्यमा छन् । नेपलामा हुँदा उनी माउन्टेन टेलिभिजनमा समाचार वाचिकाको रूपमा कार्यरत थिइन् । उनी मेरी मिल्ने साथी पनि हुन् ।
म्यासेजमा लेखिएको थियो, ‘दिदी, मलाई त कोरोना भाइरस लागेछ नि !’
ह्वाट ! त्यो म्यासेजले वरिपरि सन्नाटा नै छायो । उनको म्यासेजले स्तब्ध भएँ । आगोझैँ कोरोना संसारभर फैलिएको छ । कोरोनाले शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई झन् नराम्रोसँग गाँजेको छ । समाचारमा विदेशमा रहेका नेपालीमा पनि कोरोना भन्ने समाचार सुन्दै आएकी थिएँ । आफ्नै साथीलाई पनि कोरोनाले छाडेन । फेरि अर्को मनले सोचेँ, कतै जिस्किएकी त होइन !
‘सिरियस्ली ?’, मैले गुञ्जनलाई प्रस्ट पार्न भनेँ ।
‘हो दिदी, कोरोना भाइरस लागेको । अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेकी छु’, गुञ्जनले भनिन् ।
उनको जवाफले मन नै अमिलो भयो ।
‘कस्तो छ स्वास्थ्य ? कहाँ छौ ? के हुँदै छ ?’ छट्पटी र उत्सुक्तासँगै मैले एकपछि अर्को प्रश्न राख्दै गएँ ।
दरिलो मन बनाएर उनले यसरी उत्तर दिइन्-
अहिले मलाई ठीक छ । ९ दिन अगाडि रुघाखोकी लागेपछि मलाई शंका लाग्यो- कतै मलाई पनि कोरोना भाइरस सरेको त होइन ?
म बसेको ठाउँ वरपर रहेका केही नेपालीमा पनि कोरोना संक्रमण भएको थियो । कति उपचार गराइरहेका पनि छन् ।
रुघाखोकी र अलिअलि ज्वरो आएपछि स्वाब परीक्षण गरेँ । रिपोर्ट नेगेटिभ आउला भन्ने आशा थियो तर ठीक विपरीत रिपोर्ट पोजिटिभ आयो ।
सबै ठाउँमा कोरोनाको त्रास छ । सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरू हेर्दा अनि पढ्दा मन आत्तिएको थियो । आफ्नै रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । पोजिटिभ रिपोर्ट आउँदा छाँगाबाट खसेझैँ पनि भयो । एकछिन त लाग्यो, अब के हुने होला ? तर, कमजोर भएर रोगलाई जित्न सकिँदैन भन्ने बुझेकी थिएँ । त्यसैले आफ्नो मनलाई बलियो बनाएँ ।
अनि डाक्टरसँग सल्लाह गरेँ । अस्पतालमा भन्दा पनि म आफ्नै घरमा नै बस्न चाहन्छु भनेँ । डाक्टरले ठीक छ, बस्न मिल्छ, कुनै ठूलो समस्या भयो भने अस्पताल आउनू भन्नुभयो ।
अस्पताल गएर पनि यो रोगको न औषधि छ, न त भ्याक्सिन नै । त्यसैले घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेकी छु । घर परिवारका सदस्यसँगको प्रत्यक्ष सम्र्पकबाट टाढा बसेकी छु ।
जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, खोकी लाग्ने, अत्याधिक ज्वरो आउने भयो । यसको औषधि अरू नभएकाले नेपालकै जडिबुटी खाइरहेकी छु । बेसार, अदुवा, टिमुर, जिम्बु, ज्वानो, तुलसीपत्र, गुर्जोको धुलो हालेर पानी पिउने गरेकी छु ।
३-४ दिनसम्म सास फेर्न गाह्रो भयो । अत्यधिक टाउको दुखेकाले दुखाइ कम गर्न औषधिको प्रयोग गरेँ । ५ दिनसम्म त साह्रै गाह्रो भयो । सास फेर्न गाह्रो हुँदा छट्पटी पनि भयो । घरेलु औषधि पनि खाइरहेँ । प्रत्येक घण्टामा २ गिलास पानी पिएँ ।
८ दिनपछि अलिक सजिलो भयो । डाक्टरसँगको सल्लाहअनुसार अझै ७ दिन यसरी नै आराम गर्नुपर्छ सँगै घरेलु औषधि पनि लिने गर्छु ।
केही दिनयता धेरै कम भएको छ । कुनै दुखाइ, ज्वरो, खोकी छैन । यो भाइरसको प्रभाव १४ दिनसम्म रहने भएकाले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा नै बस्छु अनि मात्र सामान्य दैनिकीमा फर्किन्छु ।
समाचारमा जसरी भयावह देखाइन्छ, भनिन्छ, त्यो होइन रहेछ । आत्मबल बलियो बनाउनुपर्छ । आफ्नो हेरचाहसँगै समाजिक दूरी कायम राख्नुपर्छ । यो कुनै ठूलो रोग जस्तो मलाई लागेन ।
केही दिन गाह्रो भएको महसुस हुन्छ । सास फेर्न गाह्रो हुने हुँदा धैरैलाई पीडा भएजस्तो लाग्छ । अन्यथा साधारण रुघाखोकी जस्तो हो यो । मैले अन्य औषधि केही पनि खाइनँ । नेपालमा रुघाखोकी लाग्दा खाने घरेलु औषधिले नै ठीक भए । त्यसैले कोरोना लाग्दैमा हतोत्साही हुनुपर्दैन । तर, सावधानी र सामाजिक दूरी भने राख्नुपर्छ ताकि अन्य किसिमको संक्रमण नहोस् ।
अस्पताल नै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । डाक्टरसँग सल्लाह र सम्पर्कमा रहिरहे घरमै बसेर पनि निको हुन सकिन्छ ।
गुञ्जनको कुरा सुनेर अघिसम्म डराएको मेरो मन एकाएक बलियो बन्यो । कति सहजै कोरोनालाई जित्न सकिने रहेछ ! मात्र सावधानी र सचेतना अपनाए ठीक हुने यस रोगलाई किन यति धेरै हाउगुजी बनाइएको छ ? यसको उत्तर न गुञ्जनसँग छ, न त मसँगै नै ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १४, २०७७, १९:०१:००
पत्रकारहरुद्वारा पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै प्रदर्शन
'गलबन्दी-पछ्याैरी'को टिजर सार्वजनिक
कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए ? (सूचीसहित)
कर्णालीमा थप ९ संक्रमित भेटिए, ५१ जना निको भए